Ahoana no hahatonga ny zazavavy frantsay: ny Andinin-tsoratra masina (miaraka amin'ny sary) - ny frantsay zazavavy Mampiaraka - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Raha ny olona dia ny frantsay, ireto misy toro-hevitra mahasoa. Ny fiarahana amin'ny teny frantsay ny vehivavy no Wiki toy ny Wikipedia, izay midika hoe maro ny lahatsoratra dia nosoratana tamin'ny fiaraha-miasa. Mba hamorona lahatsoratra ity, an-tsitrapo ny mpanoratra niara-niasa hanova izany sy hanatsarana azy io rehefa nandeha ny fotoana. Ity lahatsoratra ity dia afaka ihany koa indraindray ho hita.
Ny kolontsaina manana ny heviny manokana momba ny zavatra ho atao sy ny zavatra tsy tokony atao.
Inona no mety ho heverina tantaram-pitiavana ao amin'ny kolontsaina iray dia afaka mora foana ho heverina miavonavona amin'ny hafa. Farany, fa momba ny inona ny mahita olona (na tsy mahita), fa tsara ny mahafantatra kely mikasika ny kolontsaina ny olona tianao. Raha ny olona dia ny frantsay, ireto misy toro-hevitra mahasoa. Na raha toa ianao ka tsy Amerikana iray, dia tsara kokoa mba hialana ny toetra antsoina hoe"ratsy tarehy Amerikana", toy ny maha tena feno fankahalana, mitaraina, satria ny zavatra rehetra dia tsy mitovy amin'ny ao an-trano, ary ny akanjo koa sendrasendra fotsiny. Tsotsotra akanjo (sneakers, baseball satroka, satroka, hoodies, t-shirt, pataloha jeans na pataloha fohy) dia tsy dia fahita any Frantsa. Ny frantsay ankizivavy tianao angamba tsy niakanjo izy satria vao niala tao am-pandriana na tonga tao an-trano avy amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena. Tsy maintsy, na. Tsy mampiseho eny, tsy very ny mangatsiaka, tsy miady mafy amin'ny namanao, ary tsy manao na inona na inona izay mety hisarika ny saina fa tsy mahita hafa Frenchmen. Ny teny frantsay ireo, toy ny fitsipika, ny tena malala-tsaina. Raha toa ka manana mpitahiry ny nentin-drazana sy ny fomba fijeriny ara-pivavahana, dia tsy hahatakatra fa izany Frenchwoman angamba manana fomba fijery liberaly. Miresaka momba ny fomba"dia tokony ho"dia fomba mora mba hamono ny olon-tiany. Ho vonona ny milaza fa ny mpanao gazety frantsay izay dia nihaona tamin'ny vehivavy eo amin'ny lafiny roa amin'ny Atlantika dia nahatsikaritra fa ny vehivavy eo amin'ny kolontsaina sasany (indrindra fa ny Amerikana) manana bebe kokoa ny"fifanarahana"fomba Fiarahana, te-hahafantatra izay efa lasa ireo fifandraisana, izay izy ireo dia nandeha, etc. Ho hitanao fa Frantsay ny vehivavy dia tsy maika mba hamaritana ny fifandraisana ary izy dia mety ho nihatony sy saro-kenatra kokoa noho izay azonao ampiasaina mba. Raha izany no nampikorontan-tsaina mahagaga, avy eo mamaky ny mpanoratra boky iray momba ny fomba frantsay vehivavy nijery ny sakafo hariva antoko sy ny tongotra dia afaka manampy anao hahatakatra fa izy ireo dia tia mihaona amin'ny olona ho an'ny sakafo hariva ireo antoko sy ny tongotra, fa tsy amin'ny ara-dalàna hatramin'izao, izay bebe kokoa tahaka ny resadresaka.
Разговор направен во Франција
ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana raha tsy misy fepetra ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny tovovavy taona toerana velona Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana video Mampiaraka toerana maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana lahatsary internet maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana aoka ny hiresaka Mampiaraka toerana ho an'ny lehibe velona ny lahatsary amin'ny chat amin'ny chat roulette maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat toerana Mampiaraka